S7 ụgbọ elu Russia na-ekwupụta ụgbọ elu gaa ebe abụọ ọhụụ na Croatia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » S7 ụgbọ elu Russia na-ekwupụta ụgbọ elu gaa ebe abụọ ọhụụ na Croatia
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Croatia na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Sgbọ elu Russia S7 ịmalite ụgbọ elu ọhụrụ na obodo Split na Zadar nke Croatian.
Gbọ elu si Moscow gaa Split ga-arụ ọrụ na Fraịde malite na June 2
Gbọ elu si Moscow gaa Zadar ga-arụ ọrụ na Satọde bidoro na June 26
N’April 2021, S7 maliteghachikwara ụgbọ elu kwa izu na Pula, Croatia
'Sgbọelu Russia nke S7 kwuputara taa na ọ ga-ebugharị ụgbọelu bu ndị njem ibu n'obodo Split na Zadar na Croatia na June nke afọ a.
Ka ọ dị ugbu a, a kwụsịtụrụ ụgbọ elu na-adị na Russia na Kroeshia n'ihi ọrịa na-efe efe COVID-19. Agbanyeghị, ụgbọ elu nwere ike ịrụ ọrụ ụgbọ ala na ụgbọ elu ndị njem.
"S7 Airlines amalitela ire tiketi ụgbọelu maka ụgbọ elu ụgbọelu si Moscow gaa obodo ukwu Split na Zadar nke Croatian. Gbọ elu si Moscow gaa Split ga-arụ ọrụ na Fraịde malite na June 25. Thegbọ elu si Moscow gaa Zadar ga-arụ ọrụ na Satọdee malite na June 26, "S7 kwuru na nkwupụta ahụ.
Kroeshia dị ugbu a maka njem, mana ndị njem si mba ọzọ ga-eweta ndozi nkwari akụ akwụ ụgwọ ha mgbe ha batara. Ọ dịkwa mkpa ka ha gosipụta ule PCR na-adịghị mma ewere karịa 48 awa tupu ụbọchị njem ma ọ bụ akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi.
N’April 2021, S7 maliteghachikwara ụgbọ elu kwa izu na Pula (Croatia). Tupu mgbe ahụ, ụgbọ elu ahụ malitere ụgbọ elu si Moscow gaa France, Spain, Italy, Germany, Austria, Bulgaria, Greece na Cyprus.